ဒီခေတ်ကြီးမှာ အိမ်ထောင်ပြုတာ ဘာကြောင့်ခက်ခဲလာတာလဲ ? – Gentleman Magazine
ဒီခေတ်ကြီးမှာ အိမ်ထောင်ပြုတာ ဘာကြောင့်ခက်ခဲလာတာလဲ ?
အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာက လောင်းကစားလိုပါပဲ။ ရလဒ်က ကောင်းမကောင်းဆိုတာ (အိမ်ထောင်ရေး အောင်မြင်တယ် ရှုံးနိမ့်တယ်ဆိုတာ) ရင်တမမနဲ့ပါ။ တိုးတက်လာတဲ့ ၂၁ ရာစုကြီးမှာ အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာက တော်တော်ခက်ခဲလာတဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုပါ။
အိမ်ထောင်ပြုပြီး အိမ်ထောင်ရေးမသာယာတဲ့ လူတွေ အများအပြားကြုံတွေ့ရသလို အိမ်ထောင် ပြုပြီး အိမ်ထောင်ရေးသာယာတဲ့ သူတွေကလည်း ဟိုးအရင်ခေတ်တွေ ကနဲ့မတူ ပိုမိုပျော်ရွှင်နေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒါတွေကဘာကြောင့်လဲ အဖြေရှာဖို့အတွက် ဘာကြောင့်အိမ်ထောင်ပြုကြသလဲဆိုတာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
အိမ်ထောင်ပြုရတဲ့အကြောင်းအရင်း များစွာထဲက အဓိကကျတဲ့အကြောင်းများကတော့
၁ – အိမ်ထောင်ပြုရန် အရွယ်ရောက်လို့ယူတာ
၂ – ကိုယ်ကချစ်လို့ ယူတာ
၃ – တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ချစ်လို့ နားလည်စွာနဲ့ယူတာ
၁ – အရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ဆီမှာချစ်သူမရှိ ရည်းစားမရှိ ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီး ဝိုင်းလှော်ပေးတာနဲ့၊ မိဘက ပေးစားတာနဲ့၊သူငယ်ချင်းတွေ က မြှောက်ပေးတာနဲ့ ဆိုပြီး မိန်းမယူတက်ကြပါတယ်။ ဒီလိုပေါင်းစည်းမှုများက အချစ်ကိုအဓိကမထားပဲနဲ့ ပြေလည်မည့်အိမ်ထောင်ဖက်ကို ခေါင်းသုံးပြီရွေးချယ်ကြတာများပါတယ်။ မတိုးတက်သေးတဲ့ နေရာတွေ တောရွာတွေမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတက်တယ်။ တွေ့ဖူးနေကျမိန်းမတွေကလည်း ကိုယ့်ရွာပတ်လည်လောက်ကပဲ ရှိတော့ ရွေးစရာကလွန်စွာနည်းပါးပါတယ်။ မိန်းမယူတယ်ဆိုတာကိုက ကိုယ့်နဲ့ ကိုယ့်မိဘကို ပြုစုစောင့်ရှောင့်မယ့်သူ၊ ယောက်ျားက အပြင်မှာ စားဝတ်နေရေးအတွက် ရုံးကန်နေချိန် အိမ်အလုပ်တွေကို တစ်နို်င်တစ်နင်းတာဝန်ယူနိုင်မယ့်သူ ကို ရှာဖွေတက်ကြပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ရှေးရိုးအစဉ်အလာအတိုင်းကြီးပေါ့။
၂ – ဒါတွေအကုန်လုံးက စက်မှုတိုးတက်ထွန်းကားလာတဲ့ခေတ်မှာ ပြောင်းလဲကုန်ပါတယ်။ လယ်ထဲရွာထဲ မှာနေထို်င်သူတွေက မြို့ပေါ်တက်လာပြီး အလုပ်ချိန်နည်းပြီး ငွေပိုရတဲ့ အလုပ်တွေလုပ်ကြ၊ စားဖို့သောက်ဖို့ အလွယ်တကူရနိုင်တာ၊ အဝတ်အထည်တွေ လျှော်ရန် လွယ်ကူလာတာတွေ၊ အိမ်မှုကိစ္စ တွေတော်တော်များများက စက်ပစ္စည်းများကို အစားထိုးအသုံးပြုလာတဲ့ အတွက် အချိန်တိုတို အတွင်းမှာ ပဲ အကုန်လုံးလုပ်နိုင်တာကြောင့် အိမ်ရှင်မများပင် လိုအပ်မှုနည်းလာပါတယ်။ ထို့အတူ ခေတ် မိန်းခလေးတွေဆို ထမင်းဟင်း ချက်တက်တဲ့ လူရှားလာပါပြီး ကိုယ်ပိုင် ဝင်ငွေ ရှာနိုင်တဲ့ မိန်းခလေးတွေ များလာခဲ့ပါပြီ။ ကိုယ်ပိုင် အားလပ်ချိန်များ အပိုရရှိလာတဲ့ စက်မှု ခေတ်ကြီးမှာ အိမ်ထောင်ပြုရတဲ့ အဓိပ္မာယ်က လည်း ခေတ်နဲ့ အညီပြောင်းလဲသွားပါပြီ။ မ်ိန်းမများ အနေနဲ့ ယောက်ျားယူပြီးအိမ်မှာ ငုတ်တုတ်နဲ့ လုပ်စရာမရှိဖြစ်လာတော့မှာ ဖြစ်တဲ့ခေတ်မှာ အိမ်မှုကိစ္စနိုင်နင်းတာထက် အချစ်ကို ဦးစားပေးပြီး လက်ထက်တာတွေဖြစ်လာပါပြီး ကိုယ်ချစ်နိုင်မယ့်လူကို ရှာဖွေရွေးချယ်လာကြပါပြီ။
၃ – အခု အင်ဖော်မေးရှင်းခေတ်ရောက်လာတော့ လူတွေအတွက် မိန်းမရှာရတာ အလွန်လွယ်ကူလာပါတယ်။ သွားရလာရတာ လွယ်ကူတာ၊ ဆက်သွယ်ရတာ လွယ်ကူတာတွေ၊ အင်တာနက်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် မိုင်ထောင်ပေါင်းများစွာက လူတွေနဲ့ ကြူကြူခင်းနိုင်တာတွေဟာ ကြင်ဖော် ရှာဖွေဆက်သွယ်ဖို့အတွက် အဓိက အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ လိင်ကိစ္စ လိုအပ်ချက်များစွာကို တောင် အိမ်ထောင်ပြုစရာမလိုပဲ လွယ်လွယ်နဲ့ ရရှိနိုင်တဲ့ခေတ်ကိုရောက်လာတော့ အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဟာ မလုပ်မနေလုပ်ရမယ့် ထုံးစံကနေပြီးတော့ ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ခွင့်အနေနဲ့ အသွင်ပြောင်းခဲ့ရပါပြီ။ ကိုယ်က ချစ်နေရုံ မိန်းမမျိူးကိုရှာမယ့် အစား ကိုယ့်ကို ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာပျော်ရွှင်အောင်ထားနိုင်မယ့် . အပြန်အလှန် နားလည်မှုပေးနိုင်မယ့်လူမျိုးကို ရှာဖွေလာကြပါပြီ။ အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ စိတ်ချမ်းသာမှု ရှာဖွေတယ်ဆိုပြီး ကိုယ့် ကြင်ဖော် ဆီကနေ မျော်လင့်ချက်များစွာထားရှိလာတက်ပါတယ်။ ဒါတွေကို အစကတည်းကရှောင်ကြင်သင့်ပါတယ်။ စိတ်ကြေနပ်မှု စိတ်ချမ်းသာမှုတွေကို ကြင်ဖော် ဆီမှ သီးသန့်မဟုတ်ပဲနဲ့ အလုပ်၊ ဝါသနာ၊ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်း တွေဆီမှလည်း ရယူသင့်ပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ် ကြင်ဖက်ဆီကနေ မျော်လင့်ချက်များစွာ ထားတက်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း များစွာ ပေးဆပ်စတေးတက်ဖို့ပြင်ထားရပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က စိတ်ချမ်းသာမှုကို တခြားကမရှာတက်ဘူး . ရင်းနှီး ပေးဆပ်မှုတွေလဲ မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ သူများသွားဒုက္ခမပေးပဲ ကိုယ့် ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်စမ်းစစ်ကြည့်ကာ ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ ဖြစ်ကောဖြစ် နိုင်ရဲ့လား ဆိုတာ သုံးသပ်ကြည့်သင့်နေပါပြီ။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ အနေအထားနဲ့ ကြည့်ရရင် အထက်ဖော်ပြပါ လူမျိုး သုံးမျိုးလုံးကို တွေ့မြင်နေရမှာပါ။ ဒါဟာ ပြသာနာ တွေအားလုံးရဲ့ စမှတ်ပါ။ နံပတ် ၃ စုံတွဲ က တော့ ၁ နဲ့ ၂ စုံတွဲ ထက် ပျော်ရွှင်သာယာမယ်လို့လက်ခံမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁ က ၁ နဲ့ပဲ တွဲ မှ၊ ၂ က ၂ နဲ့ပဲတွဲမှ ၊ ၃ က ၃ နဲ့ပဲတွဲ အမှ အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပြီး တခြားသူတွေနဲ့ တွဲမိတဲ့ အခါ ဒုက္ခလှလှ တွေ့သွားမှာပါ။ အကယ်၍ ၁ ချည်းပဲ ၊ ၂ ချည်းပဲ ၊ ၃ ချည်းပဲဖြစ်နေရင် တော့ ကြင်ဖော်ရှာရတာလွယ်ပေမယ့် အရော အနှောတွေ ကို ရှောင်ရှားနေရတဲ့ ဒီ စပ်ကူးမတ်ကူး ခေတ်ကြီးမှာ မိမိနဲ့ စိတ်တူ ကိုယ်တူ ရှာဖို့ လွန်စွာမှ ခဲယဉ်းလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့. ကို်ယ်ကလည်း နံပတ် ၃ သူကလည်း နံပတ် ၃ ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးက ကိုယ့် အဖေအမေ အဖိုးအဖွား များထက်ပင်သာယာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အချစ်ကံကောင်းကြပါစေ။
မိန်းကလေးတိုင်း တောင့်တပြီး . . . ယောက်ျားလေးတိုင်း အားကျစေဖို့ . . .
ဒီခတျေကွီးမှာ အိမျထောငျပွုတာ ဘာကွောငျ့ခကျခဲလာတာလဲ ?
အိမျထောငျပွုတယျဆိုတာက လောငျးကစားလိုပါပဲ။ ရလဒျက ကောငျးမကောငျးဆိုတာ (အိမျထောငျရေး အောငျမွငျတယျ ရှုံးနိမျ့တယျဆိုတာ) ရငျတမမနဲ့ပါ။ တိုးတကျလာတဲ့ ၂၁ ရာစုကွီးမှာ အိမျထောငျပွုတယျဆိုတာက တျောတျောခကျခဲလာတဲ့လုပျရပျတဈခုပါ။
အိမျထောငျပွုပွီး အိမျထောငျရေးမသာယာတဲ့ လူတှေ အမြားအပွားကွုံတှရေ့သလို အိမျထောငျ ပွုပွီး အိမျထောငျရေးသာယာတဲ့ သူတှကေလညျး ဟိုးအရငျခတျေတှေ ကနဲ့မတူ ပိုမိုပြျောရှငျနကွေတာကိုတှရေ့မှာပါ။ ဒါတှကေဘာကွောငျ့လဲ အဖွရှောဖို့အတှကျ ဘာကွောငျ့အိမျထောငျပွုကွသလဲဆိုတာကို လလေ့ာကွညျ့ရအောငျ။
အိမျထောငျပွုရတဲ့အကွောငျးအရငျး မြားစှာထဲက အဓိကကတြဲ့အကွောငျးမြားကတော့
၁ – အိမျထောငျပွုရနျ အရှယျရောကျလို့ယူတာ
၂ – ကိုယျကခဈြလို့ ယူတာ
၃ – တဈယောကျကိုတဈယောကျ ခဈြလို့ နားလညျစှာနဲ့ယူတာ
၁ – အရှယျရောကျလာပွီဆိုတာနဲ့ ကိုယျ့ဆီမှာခဈြသူမရှိ ရညျးစားမရှိ ရငျပတျဝနျးကငျြကနပွေီး ဝိုငျးလှျောပေးတာနဲ့၊ မိဘက ပေးစားတာနဲ့၊သူငယျခငျြးတှေ က မွှောကျပေးတာနဲ့ ဆိုပွီး မိနျးမယူတကျကွပါတယျ။ ဒီလိုပေါငျးစညျးမှုမြားက အခဈြကိုအဓိကမထားပဲနဲ့ ပွလေညျမညျ့အိမျထောငျဖကျကို ခေါငျးသုံးပွီရှေးခယျြကွတာမြားပါတယျ။ မတိုးတကျသေးတဲ့ နရောတှေ တောရှာတှမှော ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိတကျတယျ။ တှဖေူ့းနကေမြိနျးမတှကေလညျး ကိုယျ့ရှာပတျလညျလောကျကပဲ ရှိတော့ ရှေးစရာကလှနျစှာနညျးပါးပါတယျ။ မိနျးမယူတယျဆိုတာကိုက ကိုယျ့နဲ့ ကိုယျ့မိဘကို ပွုစုစောငျ့ရှောငျ့မယျ့သူ၊ ယောကျြားက အပွငျမှာ စားဝတျနရေေးအတှကျ ရုံးကနျနခြေိနျ အိမျအလုပျတှကေို တဈနျိုငျတဈနငျးတာဝနျယူနိုငျမယျ့သူ ကို ရှာဖှတေကျကွပါတယျ။ ပွောရမယျဆိုရငျတော့ ရှေးရိုးအစဉျအလာအတိုငျးကွီးပေါ့။
၂ – ဒါတှအေကုနျလုံးက စကျမှုတိုးတကျထှနျးကားလာတဲ့ခတျေမှာ ပွောငျးလဲကုနျပါတယျ။ လယျထဲရှာထဲ မှာနထျေိုငျသူတှကေ မွို့ပျေါတကျလာပွီး အလုပျခြိနျနညျးပွီး ငှပေိုရတဲ့ အလုပျတှလေုပျကွ၊ စားဖို့သောကျဖို့ အလှယျတကူရနိုငျတာ၊ အဝတျအထညျတှေ လြှျောရနျ လှယျကူလာတာတှေ၊ အိမျမှုကိစ်စ တှတေျောတျောမြားမြားက စကျပစ်စညျးမြားကို အစားထိုးအသုံးပွုလာတဲ့ အတှကျ အခြိနျတိုတို အတှငျးမှာ ပဲ အကုနျလုံးလုပျနိုငျတာကွောငျ့ အိမျရှငျမမြားပငျ လိုအပျမှုနညျးလာပါတယျ။ ထို့အတူ ခတျေ မိနျးခလေးတှဆေို ထမငျးဟငျး ခကျြတကျတဲ့ လူရှားလာပါပွီး ကိုယျပိုငျ ဝငျငှေ ရှာနိုငျတဲ့ မိနျးခလေးတှေ မြားလာခဲ့ပါပွီ။ ကိုယျပိုငျ အားလပျခြိနျမြား အပိုရရှိလာတဲ့ စကျမှု ခတျေကွီးမှာ အိမျထောငျပွုရတဲ့ အဓိပ်မာယျက လညျး ခတျေနဲ့ အညီပွောငျးလဲသှားပါပွီ။ မျိနျးမမြား အနနေဲ့ ယောကျြားယူပွီးအိမျမှာ ငုတျတုတျနဲ့ လုပျစရာမရှိဖွဈလာတော့မှာ ဖွဈတဲ့ခတျေမှာ အိမျမှုကိစ်စနိုငျနငျးတာထကျ အခဈြကို ဦးစားပေးပွီး လကျထကျတာတှဖွေဈလာပါပွီး ကိုယျခဈြနိုငျမယျ့လူကို ရှာဖှရှေေးခယျြလာကွပါပွီ။
၃ – အခု အငျဖျောမေးရှငျးခတျေရောကျလာတော့ လူတှအေတှကျ မိနျးမရှာရတာ အလှနျလှယျကူလာပါတယျ။ သှားရလာရတာ လှယျကူတာ၊ ဆကျသှယျရတာ လှယျကူတာတှေ၊ အငျတာနကျရဲ့ကြေးဇူးကွောငျ့ မိုငျထောငျပေါငျးမြားစှာက လူတှနေဲ့ ကွူကွူခငျးနိုငျတာတှဟော ကွငျဖျော ရှာဖှဆေကျသှယျဖို့အတှကျ အဓိက အထောကျအကူ ဖွဈစပေါတယျ။ လိငျကိစ်စ လိုအပျခကျြမြားစှာကို တောငျ အိမျထောငျပွုစရာမလိုပဲ လှယျလှယျနဲ့ ရရှိနိုငျတဲ့ခတျေကိုရောကျလာတော့ အိမျထောငျပွုခွငျးဟာ မလုပျမနလေုပျရမယျ့ ထုံးစံကနပွေီးတော့ ကိုယျပိုငျရှေးခယျြခှငျ့အနနေဲ့ အသှငျပွောငျးခဲ့ရပါပွီ။ ကိုယျက ခဈြနရေုံ မိနျးမမြိူးကိုရှာမယျ့ အစား ကိုယျ့ကို ကိုယျရောစိတျပါ ခမျြးသာပြျောရှငျအောငျထားနိုငျမယျ့ . အပွနျအလှနျ နားလညျမှုပေးနိုငျမယျ့လူမြိုးကို ရှာဖှလောကွပါပွီ။ အိမျထောငျပွုတယျဆိုတာ စိတျခမျြးသာမှု ရှာဖှတေယျဆိုပွီး ကိုယျ့ ကွငျဖျော ဆီကနေ မြျောလငျ့ခကျြမြားစှာထားရှိလာတကျပါတယျ။ ဒါတှကေို အစကတညျးကရှောငျကွငျသငျ့ပါတယျ။ စိတျကွနေပျမှု စိတျခမျြးသာမှုတှကေို ကွငျဖျော ဆီမှ သီးသနျ့မဟုတျပဲနဲ့ အလုပျ၊ ဝါသနာ၊ သူငယျခငျြး အပေါငျးအသငျး တှဆေီမှလညျး ရယူသငျ့ပါတယျ။ ဒါမှ မဟုတျ ကွငျဖကျဆီကနေ မြျောလငျ့ခကျြမြားစှာ ထားတကျတယျဆိုရငျတော့ ကိုယျကိုယျတိုငျကလညျး မြားစှာ ပေးဆပျစတေးတကျဖို့ပွငျထားရပါတယျ။ ကိုယျကိုယျတိုငျက စိတျခမျြးသာမှုကို တခွားကမရှာတကျဘူး . ရငျးနှီး ပေးဆပျမှုတှလေဲ မလုပျခငျြဘူးဆိုရငျတော့ သူမြားသှားဒုက်ခမပေးပဲ ကိုယျ့ ကိုယျတိုငျပွနျလညျစမျးစဈကွညျ့ကာ ကိုယျဘာဖွဈခငျြတာလဲ ဖွဈကောဖွဈ နိုငျရဲ့လား ဆိုတာ သုံးသပျကွညျ့သငျ့နပေါပွီ။
လကျရှိမွနျမာနိုငျငံ အနအေထားနဲ့ ကွညျ့ရရငျ အထကျဖျောပွပါ လူမြိုး သုံးမြိုးလုံးကို တှမွေ့ငျနရေမှာပါ။ ဒါဟာ ပွသာနာ တှအေားလုံးရဲ့ စမှတျပါ။ နံပတျ ၃ စုံတှဲ က တော့ ၁ နဲ့ ၂ စုံတှဲ ထကျ ပြျောရှငျသာယာမယျလို့လကျခံမယျထငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ၁ က ၁ နဲ့ပဲ တှဲ မှ၊ ၂ က ၂ နဲ့ပဲတှဲမှ ၊ ၃ က ၃ နဲ့ပဲတှဲ အမှ အဆငျပွမှောဖွဈပွီး တခွားသူတှနေဲ့ တှဲမိတဲ့ အခါ ဒုက်ခလှလှ တှသှေ့ားမှာပါ။ အကယျ၍ ၁ ခညျြးပဲ ၊ ၂ ခညျြးပဲ ၊ ၃ ခညျြးပဲဖွဈနရေငျ တော့ ကွငျဖျောရှာရတာလှယျပမေယျ့ အရော အနှောတှေ ကို ရှောငျရှားနရေတဲ့ ဒီ စပျကူးမတျကူး ခတျေကွီးမှာ မိမိနဲ့ စိတျတူ ကိုယျတူ ရှာဖို့ လှနျစှာမှ ခဲယဉျးလာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စိတျဓာတျမကပြါနဲ့. ကျိုယျကလညျး နံပတျ ၃ သူကလညျး နံပတျ ၃ ဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ရဲ့အိမျထောငျရေးက ကိုယျ့ အဖအေမေ အဖိုးအဖှား မြားထကျပငျသာယာမှာဖွဈပါတယျ။ အခဈြကံကောငျးကွပါစေ။
Previous: ဆွဲဆောင်မှုကောင်းလာအောင် အရက် သောက်သင့်
Next: ပထမဆုံး ချိန်းတွေ့နေတဲ့ အချိန် လုံးဝ မလုပ်သင့်တဲ့ အရာ